Uppercut Deluxe - Monster Hold | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Uppercut Deluxe - Monster Hold
Regular price MMK 45,000
Single - MMK 45,000 MMK3Pack - MMK 135,000 MMK
--Heavy Hold | Medium Shine | Classic Oil-Based Pomade--
တစ်နေ့တာအတွက် တာရှည်ခံနိုင်အားအလွန်ကောင်းပြီး၊ Monster Hold ဟုခေါ်ရမည့် Heavy & Strong ထိန်းအားဖြင့် ချောချောမွေ့မွေ့ပုံကျစေသောကြောင့် ဆံပင်ထူသူများ၊ ဆံပင်ကြမ်းသူများအတွက် ပုံသွင်းစွမ်းအားအလွန်ကောင်းပြီး၊ ဆံသားခြောက်သွေ့သူတို့နှင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမြဲလိမ်းပေးထားတတ်သူတို့အတွက်လည်းသင့်တော်ကာ ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်မည့် ခေါင်းလိမ်းဆီ...
Uppercut Deluxe - Monster Hold သည် ကမ္ဘာကျော် အရည်အသွေးမြင့် Premium ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Uppercut Deluxe - Australia နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးများလက်ထက်မှစပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဂန္တဝင် old school - Oil Based Pomade အမျိုးအစား Classic ခေါင်းလိမ်းဆီကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်တာရှည်ခံသည့် ထိန်းအားအကောင်းဆုံး Monster Hold ပါရှိပြီး၊ ဆံပင်ကို အနေတော်တောက်ပြောင်စေမှု Medium Shine နှင့် ဆံပင်ကိုတောင့်ခဲသွားစေခြင်းမရှိ၊ အချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြောင်းနိုင်စေကာ၊ ဆံပင်ထူသူများအတွက် ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် ပုံသွင်းမှုစွမ်းအားအလွန်ကောင်းသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသည့် ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ဆံပင်ထူသူများ၊ ဆံပင်ကြမ်းသူများအတွက် ချောချောမွေ့မွေ့ရှိစေပြီး၊ ဆံသားခြောက်သွေ့သူတို့နှင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမြဲလိမ်းပေးထားတတ်သူတို့အတွက်လည်းသင့်တော်ကာ ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကိုခံနိုင်မည့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ဘီးကိုအသုံးပြုပြီး ဆံပင်ကောက်သားကိုပြေစေရုံသာမက ဆံပင်ရဲ့ ရေဓာတ်ကိုလဲ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ Oil-Based ဖြစ်သည့်အတွက် ခေါင်းလျှော်ရာတွင် Build Up အဆီကျန်ခဲ့စေခြင်းကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လိမ်းရာတွင်ခေါင်းလိမ်းဆီအကုန်သက်သာစေပါတယ်။
မာခဲစေခြင်းမရှိ၊ ဆံပင်အစိုဓာတ်ကိုအားဖြည့်ပေးသော အဆီအမျိုးအစား Oil Based Pomade
တာရှည်ခံ ထိန်းအားအကောင်းဆုံး Monster Hold
အနေတော်တောက်ပြောင်စေမှု Medium Shine
Build Up Effect ကြောင့် ခေါင်းလျှော်ပြီး နောက်အကြိမ်ပြန်လိမ်းရာတွင် အကုန်သက်သာစေပြီး၊ ထိန်းအားပိုကောင်းစေခြင်း
Build Up Effect ကြောင့် ခေါင်းလျှော်ရာတွင် အချိန်အနည်းငယ်ပိုယူရခြင်း
Being wax based, Monster Hold won’t set, making it perfect for anyone that likes to restyle their look. This also means that it won’t wash out with water or sweat.
Long Lasting Monster Hold
Build Up effect requires less product to use for next styling session and increasing hold
Build Up effect requires longer wash out time
Lime Cologne Scent